मानिसको शरीरमा किन आउँछ मुसा ? यसरी पाउनुहोस् छुटकरा:: Naya Nepal
मानिसको शरीरमा किन आउँछ मुसा ? यसरी पाउनुहोस् छुटकरा
काठमाडौँ । ह्युमन पापिलोमा भाइरस (एचपीभी) नामक भाइरसको संक्रमणबाट छालामा आउने रोग लाई हामी सामान्य भाषामा मुसा भन्दछौ ।
मुसा आउनुलाई अंग्रेजीमा वाट्स अथवा भेरुका भल्गारिस पनि भनिन्छ । यसका सयौं प्रजातीका कारणले शरीरको विभिन्न ठाउँमा मुसा आउने गर्दछ । सामान्यतया हात, खुट्टा वा गर्धनमा मुसा देखापर्दछ ।
१) औलामा आउने
२) पैतालामा आउने
३) अनुहारमा आउने
४) यौनांगमा सर्ने
स–साना वा हातखुट्टामा आउने मुसा केहि समयपछि आफैँ निको हुने गर्दछ। तर, पैताला वा हत्केलामा आएको वा यौनांगमा आउने र अनुहारमा आउने मुसाहरु भने आफैं निको हुँदैनन्। यस प्रकारको मुसा सरुवा रोगका कारणले हुने गर्दछ।
अझ मुसा कोट्याई रहने, चलाएपछि हात नधोई अन्य अंगमा छुएमा यि मुसा सर्ने गर्दछन्। अझ असुरक्षित यौन सम्पर्कको कारणले पनि यस प्रकारको मुसा आउने गर्दछ ।
कतिपय अवस्थामा दाह्रि काट्दा पुरुषमा समेत यो सर्न सक्छ । तसर्थ मुसा चलाएपछि हात राम्रोसँग धुनु पर्दछ। हात वा औला चुस्ने वा नङ टोक्ने बानी छ भने त्यसलाई त्याग्नु पर्दछ । जिम, स्विमिङ्ग लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गरीने तौलिया वा रुमाल निजि प्रयोग गर्ने । तर मुसाको मात्रा र प्रकार हेरेर तत्काल चिकित्सकसंग परामर्श लिनु नै उत्तम हुन्छ ।
मुसा कोठी हटाउनका लागि घरेलु उपायहरु :
-स्याउको भिनेगर सबैभन्दा उपयोगि प्राकृतिक उपाय हो । मुसाहटाउन यसको अचम्मको उपयोगिता छ । स्याउको भिनेगरलाई मुसा,कोठी आएको ठाउँमा लगाएमा चाँडै नै हराएर जान्छ । तर यो बिधि आँखा वरपर भने प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
-१५ मिनेटपछि मुसामा टुतपेस्ट दलेर रगड्नुहोस् र १५ मिनेट त्यत्तिकै राख्नुहोस् ।
-१५ मिनेट पछि खोलेर पानीले सफा गर्नुहोस् ।
-यो विधि दिनमा ३ पटक लगातार ७ दिन सम्म प्रयोग गर्नुहोस् हजुरको कोठि,मुसा सजिलै हराएर जानेछ ।